Umhlahlandlela Wokugcina Wokwethulwa Kwensizakalo Yevidiyo Ebhalisiwe | Martech Zone
Umhlahlandlela Wokugcina Wokwethulwa Kwensizakalo Yevidiyo Ebhaliselwe
NgoLwesibili, Agasti 27, 2019 NgoLwesibili, Agasti 27, 2019 PJ Taei
Kunesizathu esihle ngempela sokuthi kungani Ividiyo Ebhaliselwe Isidingo (SVOD) is uqhumise njengamanje: kungcono ukuthi abantu bafuna. Namuhla abathengi abaningi bakhetha for okuqukethwe kwevidiyo bangakhetha futhi ubuke ezifunekayo, njengoba kuqhathaniswa wokubuka njalo.
Futhi izibalo zibonisa ukuthi i-SVOD ayinciphisi ijubane. Abahlaziyi babikezela ukukhula kwayo ukufinyelela kufayela le- Uphawu lokubukwa kwezigidi ezingama-232 ngonyaka we-2020 e-US. Ukubukwa komhlaba wonke kulindeleke ukuthi qhuma uye ezigidini ezingama-411 ngo-2022, Zisuka ezigidini eziyisi-283 ngo-2018.
Ngenkathi izinombolo zokubukwa zihlaba umxhwele, izibalo ezimangazayo azipheli lapho. Imali engenayo ehlongozwayo isethwe ukuthi ifinyelele ku- $ 22 billion. Isabelo sebhubesi sizoya emagameni amakhulu emizi afana neNetflix, i-Amazon Prime neHulu, kepha kukhona namakhulu ezinkulungwane zabadali bamavidiyo abazimele abangena emakethe ye-SVOD echumayo.
At Isikrini, sisebenza nabadali bokuqukethwe bevidiyo abazimele. Lawa brand Sakhe imiphakathi emikhulu akhokhela ngenyanga ukufinyelela okuqukethwe kwe-premium.
Thatha iSage Network, ngokwesibonelo. Isungulwe nguRich Affannato, uJesse Kearney noBobby Traversa, umqondo bekungukuletha izigcawu zokuqala ezinhle kakhulu, amafilimu, imibhalo yaseshashalazini bukhoma, imibukiso yangempela, imibukiso ehlukahlukene namakhonsathi kuzethameli ezibanzi.
Namuhla, ngo- $ 3.99 nje ngenyanga, ungathola ukufinyelela kwezinhlobonhlobo zemidlalo yeshashalazi ngqo kusuka ku-Apple yakho noma i-smartphone ye-Android, noma iRoku noma iFireTV.
Abadali SVOD futhi bube zimboni. Ngokwesibonelo, Wanderlust TV brainchild of Jeff Krasno futhi Schuyler Grant. Kwenzeka lokhu ngemuva kokuba laba bobabili bebone ukuthi babaqongelele kangakanani abalandeli be-Wanderlust festival eyayingo-2009.
Ukushesha phambili kwanamuhla kanye neWanderlust TV inikeza abathanda i-yoga amathani amavidiyo. Ungakhetha kusuka iqembu elikhulu abafundisi, womnikelo ngamunye izindlela ezihlukahlukene zokuvivinya umzimba kanye amazinga nobunzima.
Uma uke wazibuza ngokuqala insiza yakho ye-SVOD, lezi yizibonelo ezimbili nje kuphela ezinhle kakhulu okufanele ubheke kuzo. I-SVOD, ngaphandle kokuba yindlela enhle yokwenza imali, futhi iyindlela ehlakaniphile yokuxhasa isu lokuthengisa lakho lomkhiqizo.
Ividiyo idliwa nsuku zonke ngobuningi. Futhi yonke indawo lapho uya khona, okusho ukuthi izimbangi zakho kungenzeka ukuthi seziqalile ukukhiqiza ividiyo ukunxenxa amakhasimende akho amahle.
Kulokhu okuthunyelwe kubhulogi, ngizokwabelana ngokuthi ungayethula kanjani insiza yakho ye-SVOD. Ngizochaza ukuthi imodeli yevidiyo yokubhalisela isebenza kanjani, ukuthi ungalungisa kanjani umkhiqizo wakho ukuze uphile ngokuqukethwe izithameli zakho ezingakuthola kalula, nokuthi ungayithengisa kanjani insizakalo yakho entsha ye-SVOD futhi uguqule izivakashi zibe ababhalisile.
Kepha ngaphambi kokumba iphuzu ngalinye, iyini ividiyo yokubhaliselwe?
Ukuqonda i-SVOD Business Model
Ividiyo yokubhaliselwe iyisevisi etholakalela ababhalisile nge-premium yenyanga. Njengokubhaliswa komagazini, abasebenzisi bakhokha imali ebekiwe futhi banokufinyelela kokuqukethwe kwevidiyo. Ngokungafani nokubhaliswa komagazini, izinsizakalo ze-SVOD zinikela ngokufunwayo kuwo wonke amavidiyo noma zinganikeza iziqephu ezikhishwe ngokuhamba kwesikhathi.
Izimali zokubhaliselwe zinqunywa ngabadali bokuqukethwe bevidiyo futhi zingahle zisukele kokungaphansi kokungu- $ 2 kuya phezulu.
Insizakalo ye-SVOD ingaphumelela kangakanani?
Njengomhlinzeki wesikhulumi se-SVOD, sisekela izitolo ezimbonini ezahlukahlukene. Esinye sezigaba zethu ezihola kakhulu ezempilo nokuqina komzimba. Kungakapheli lo nyaka, sibone ukwanda ngama-52% enanini lezitolo ezintsha ezethulwe kulesi sigaba.
Ngaphezu kwalokho, isitolo ngasinye sithole isilinganiso esingu- $ 7,503 ngenyanga phakathi kuka-Ephreli noJuni. Lokhu kufakazela ukuthi kunesikhala sabadali bokuqukethwe bevidiyo abazimele ukungena emakethe ye-SVOD futhi benze imali.
Isinyathelo 1: Thola i-Niche Yakho bese Uthuthukisa Umkhiqizo
Ukusungula i-niche yakho kungenzeka kube esinye sezinyathelo ezibaluleke kakhulu ozozithatha ekwakheni insizakalo ye-SVOD ephumelelayo. Ngenkathi amasayithi afana ne-Netflix ne-Hulu esiza wonke umuntu, sibone abadali bamavidiyo abazimele behluleka lapho bezama ukukopisha leyo modeli yebhizinisi.
Ukuchofoza phansi kuzokusiza ukuthi ukhiqize okuqukethwe okuqondisiwe kuzithameli ezithile. Uma kuhlanganiswe namasu wokumaketha ahlakaniphile, uzobona ukuthi okuqukethwe kwakho kuzofinyelela kubantu abalungile, okuholele ekukhuleni okulandelayo.
Ukuthola i-niche yakho kuzokwenza futhi ukuthi ukuthuthukisa umkhiqizo wakho kube lula kakhulu.
Abantu gravitate brand. Lapho kucace ngokwengeziwe umyalezo womkhiqizo nokuma kwawo, kuba lula lapho kungabonwa khona ngamakhasimende akho afanele. Uma kuziwa ukudala isevisi yakho SVOD, imikhiqizo kubalulekile.
Kepha kungaphezu nje kwelogo. Kufaka imibala ozoyisebenzisa umkhiqizo wakho, ithoni nezwi lekhophi lewebhusayithi yakho, nekhwalithi nendlela eyingqayizivele ekhanya kokuqukethwe yividiyo yakho.
Njengoba ucabanga ngomkhiqizo wakho nokuthi kufanele umeleni, cabanga ukuthi ufuna abantu bazizwe kanjani ngemuva kokudla okuqukethwe yividiyo yakho. Okuqukethwe kwakho kufanele kuxazulule inkinga ethile.
Isibonelo, ake sithi usiza abantu ukunciphisa umzimba besebenzisa amavidiyo wokuzivocavoca.
Yini okufanele izibukeli ziyizwe ngenkathi zibuka iseshini ngayinye yokuzivocavoca futhi zizizwe ngemuva kokuyiqeda? Kuthiwani ngomkhiqizo wakho ozobenza baqhubeke nokubhalisile?
I-Wanderlust idale umkhiqizo ozungeze impilo enempilo futhi ephefumulelwe. Basiza abantu ukuthi bafinyelele imigomo yabo yezempilo nenhlalakahle ngezindlela eziningi. Ababhalisile banokufinyelela kokuzindla okuqondisiwe, izinselelo ze-yoga zezinsuku ezingama-21, nokuningi.
Ividiyo ngayinye ekuwebhusayithi yabo ifaka ukubhala okuhle okucatshangelwe kahle, isithombe sombhali kanye ne-trailer enikeza izivakashi ukunambitha kokumele zikulindele.
Ngamafuphi, iWanderlust TV idale umuzwa weqiniso womkhiqizo. Babé kwenza kwaba lula isivakashi ukuba abe zokubhalisa bese uhlale ku ngokuhlakulela kusuka saqala yeleveli kokuqeda izinselele nangale sezinsuku ezingu-21.
Isinyathelo 2: Yakha futhi wenze ngezifiso iwebhusayithi yakho yevidiyo
Okulandelayo, uzodinga iwebhusayithi ukukhombisa okuqukethwe kwakho. Izosebenza njengethuluzi lokumaketha ukusiza ukuguqula izivakashi zibe yizilingo nababhalisile abagcwele.
Ukuklama Nokuthuthukisa Iwebhusayithi Yakho (DIY)
Uma ucabangela ukwakha iwebhusayithi, kunezinto ezimbalwa okufanele ukwazi. Okokuqala, kungaba umsebenzi ezibizayo futhi eziyinkimbinkimbi.
Insizakalo yakho ye-SVOD izodinga ukwazi ukusingatha nokusakaza ividiyo kubasebenzisi. Lokhu kudinga ipulatifomu yevidiyo enamandla ngokwanele ukuphatha inani elikhulu lethrafikhi. Uzodinga abathuthukisi ukuyakha kanye nomphathi wephrojekthi ukuphatha ukwakhiwa.
Uzodinga futhi ukuhlanganisa ukusebenza kwesitolo noma kwe-e-commerce okuvumela izinkokhelo zokubhaliselwe. Udinga ukwamukela izinketho eziningi zekhadi lokukhokha futhi ube nokuvikeleka okuku-inthanethi okuhle kakhulu (cabanga ngemfihlo ye-SSL) ukuvikela iwebhusayithi yakho entsha kanye nezivakashi njengoba ziphequlula futhi zikhokhela okuqukethwe kusayithi lakho.
Amapulatifomu wesiko we-SVOD nawo adinga ukugcinwa. Lokhu kusho ukuthi isikhathi esiningi silungisa futhi sigcina amapulatifomu wakho wangokwezifiso nesikhathi esincane sokwenza nokuthengisa okuqukethwe kwakho ukuze kutholakale imali.
Thola i-All-in-one zokwenza imali Ipulatifomu Thanda Uscreen
Ngenxa yobunzima obufihliwe ngenhla, nokuthi iningi labadali bamavidiyo akubona abakhi bamawebhusayithi nabathuthukisi, sithuthukise izingqikithi zewebhusayithi ezisebenziseka kalula.
Isihloko ngasinye senziwe ngezifiso kalula futhi senzelwe izethameli zakho engqondweni. Izihloko kufake hlangana esakhelwe Amakhasi ekuphumeni lapho amakhasimende ungakwazi ukukhokhela by PayPal noma credit card.
Siphinde futhi sinikeze isiqophi ibamba (nge 99.9% ikhanya), ukubhalwa kwe-SSL, ukwesekwa ulimi izibukeli emhlabeni wonke, futhi nezinye izici ezibalulekile, konke iphuma ibe nyangazonke subscription Imali.
Funda kabanzi mayelana Indikimba yendaba Uscreen kanye ngokwezifiso
Ikhophi lewebhusayithi yakho libaluleke njengale vidiyo ozobe uyihambisa. Kumele ikhulume ngqo nekhasimende lakho elifanele ukubenza bajabule ngokwanele ngokuqukethwe kwakho ukuze bazame noma babe ngababhalisile.
Nawa amathiphu ama-3 wokuthi ungayidala kanjani imiyalezo enamandla yewebhusayithi
Ubuciko Bezihloko Ezigxile Kumakhasimende - Headlines aphumelela ngamalengiso kuzo zonke izinhlobo ikhophi. Kepha ukuze bakhange, kufanele bahlangane nabavakashi bewebhusayithi. Njengoba sokucaba sematheni yakho, cabanga ekupheleni-imiphumela ekahle yakho yekhasimende bayothola ngokubuka okuqukethwe kwakho. Isibonelo, Ngokwemvelo uSassy uhlelo oluhlukile lokuzivocavoca. Sihlanganisa ukuqeqeshwa ballet ngamandla cardio. I Amazing ilungele ubani ofuna ukuthuthukisa toned, umzimba kodwa uvumelane nezimo. Ngokwemvelo Sassy sika izikhundla iwebhusayithi uhlelo ngokusebenzisa kusihloko ikhasimende-egxile "uthole isidumbu ballerina."
Sebenzisa ikhophi egxile kuzuzo - Izihloko zezindaba ezigxile kumakhasimende yisinyathelo sokuqala sokuncenga izivakashi ukuthi zibe ababhalisile. Isinyathelo esilandelayo sisebenzisa ikhophi yewebhusayithi ukudala ukulandisa okusekela nokubeka umkhiqizo wakho ukuthengiswa. Ufuna ukubanikeza amazwibela alokho abazokuzuza kokuqukethwe kwakho. Kungumqondo omuhle ukuthi ube nokuqonda okuseduze kwalokho okulindelwe yikhasimende lakho elihle kusuka kusevisi yokubhaliselwe efana neyakho futhi ukubhala uhlu lwezici noma izici zesevisi yakho yevidiyo futhi unikeze izinzuzo eceleni kwabo
Dala Amakholi Aqinile Esenzweni - Ukubizelwa esenzweni yizimbangela ezingokoqobo zabavakashi bakho bewebhusayithi. Zisetshenziselwa ukuqondisa izivakashi zakho ngokubanika iziyalezo zalokho okufanele ukwenze ngokulandelayo. Lapho kuhlanganiswa nezihloko eziqinile nokukopisha, izingcingo ezenzweni zivala kalula isivumelwano.
Isikhathi seBirdie iyinsizakalo ye-SVOD yabathanda igalofu. Basebenzise inhlanganisela ephoqayo yesihloko futhi bekopisha imiyalezo ngocingo oluqinile oluya esenzweni (“Get All-Access”).
Okwesithombe - Njengekhophi, izithombe nazo zinikela ekwakhiweni kwewebhusayithi okuqinile futhi okusebenzayo. Eqinisweni, ucwaningo lukhombisa lokho abantu bagcina imininingwane engama-65% ngaphezulu lapho ikhophi libhangqwe nezithombe ezihambisanayo. Ingxenye engcono kakhulu yokusebenzisa izithombe zewebhusayithi yakho ukuthi ungafaka izingqimba zemidwebo yamavidiyo. Bazonikeza izivakashi izibonelo ezicacile zalokho abangakulindela uma bekhokha.
Isinyathelo 3: Khetha uhlelo lwakho lokusebenza lwe-OTT
Izinhlelo zokusebenza ezingaphezulu, noma izinhlelo zokusebenza ze-OTT, yizinhlelo zokusebenza eziletha ividiyo nge-inthanethi. Ngokungafani nekhebula noma i-satellite TV, izinhlelo zokusebenza ze-OTT futhi zivumela amakhasimende akho ukuthi asakaze amavidiyo kumadivayisi weselula (ama-smartphones namathebulethi) nakuma-TV, noma nini lapho efuna khona.
Izinhlelo zokusebenza zokusakaza ividiyo ziyizinto ezibalulekile zensizakalo ye-SVOD efuthwe kahle, kepha ziyinkimbinkimbi ngokulinganayo. Ngaphandle kokuthi ungumqambi, uzobhekana nejika lokufunda eliqinile njengoba uzama ukwakha uhlelo lwakho lokusebenza.
Ungaqasha unjiniyela esikhundleni salokho, kepha lokho kungukuzivocavoca okubizayo. Ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza oluyisisekelo lwe-iOS kungabiza u- $ 29,700 no- $ 42,000 - ngaphandle kwevidiyo noma ipulatifomu yokusakaza bukhoma amandla nokusingathwa kwevidiyo yakho.
Njengesixazululo, sinikeza insizakalo ye-turnkey yabadali bokuqukethwe be-SVOD. Abathuthukisi bethu bazokwakha uhlelo lwakho lokusebenza futhi baqinisekise ukuthi luyahlangana nengqalasizinda yethu yonke. Lokhu kukunikeza konke ukusebenza namandla owadingayo ukwethula uhlelo lwakho lokusebenza lwe-OTT futhi ungakhathazeki ngokusakazwa kwevidiyo noma ukuthi uzokwazi yini ukufinyelela izithameli zakho.
Ungalukhetha kanjani uhlelo lwakho lokusebenza lokusakazwa kwevidiyo kwe-OTT
Ukuthatha uhlelo lwakho lokusebenza lwe-OTT kuncike ekutheni izithameli zakho nokuthi zizokusebenzisa kanjani okuqukethwe kwakho. Kwi Ucwaningo lwesikrini, sithole ukuthi i-65% yakho konke ukusakazwa kwevidiyo kwenzeka kuma-TV nakuzinhlelo zokusebenza ze-OTT zeselula.
Siphinde safunda ukuthi i-iOS inamandla amakhulu okufinyelela ezimakethe ezikhuluma isiNgisi, nokuthi uhhafu wabo bonke abasebenzisi bohlelo lokusebenza lwe-TV bakhetha iRoku.
Ngenkathi lolu hlobo lolwazi lungakusiza ukhethe uhlelo lokusebenza olulungele izethameli zakho, wazi ukuthi ukusetshenziswa nakho kuhlanganiswe nokusebenziseka kalula.
Isibonelo, uma unikela ngokuqukethwe kwezempilo nokuphila kahle okubandakanya ukuzivocavoca umzimba okugcwele, kungaba nengqondo enkulu ukwenza okuqukethwe kwakho kutholakale ngewebhusayithi yakho futhi dala i-Roku yakho nezinhlelo zokusebenza ze-FireTV.
Ngale ndlela, ababukeli bangabona ukunyakaza okugcwele komzimba futhi bakwenze ngaphandle kokuzama ukubamba ifoni ephathekayo, ukuyibuka nokwenza ukunyakaza komzimba ngasikhathi sinye.
Isinyathelo 4: Donsa isixuku sakho
Ususemaphethelweni wokugcina! Ukuphinda wenze kabusha, uyazi ukuthi yini i-SVOD futhi uyakuqonda ukubaluleka kokwakha umkhiqizo newebhusayithi eqinile nephumelelayo. Uyazi nokuthi yiziphi izinketho zakho zokwakha uhlelo lwakho lokusebenza lwe-OTT nokuthi unganquma kanjani ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza ongalukhetha ukuze luhambisane kahle nezilaleli zakho.
Okulandelayo, singena ngokuheha amakhasimende akho afanele.
Ukumaketha kungokwesayensi namuhla kunanini ngaphambili. Lokhu kungenxa yokuthi njalo uhlobo ukumaketha igcwaliswe inthanethi kungenziwa okusekelwe idatha, okwenza kube lula ukuba senze izinqumo ezingaphezu unolwazi mayelana nendlela asebenzise imali izikhangiso.
Kodwa uqala kuphi?
Ukudonsa izethameli akusho ukuthi kube nzima njengoba ungacabanga. Yebo, kunokuhlukahluka okuningi okufanele kubhekwe. Kusukela ngesikhathi sosuku kuze kube sesizini nokuthi lezi zinto zithonya kanjani amanani wokuchofoza futhi ekugcineni ukuthengisa.
Kepha izindaba ezinhle ukuthi unganquma ukuthi lezi zinto zikuthinta kanjani ukumaketha kwakho bese uhlela ngokufanele.
Imininingwane eminingi oyidingayo iyatholakala kuzingxenyekazi ozozisebenzisela ukumaketha.
Isibonelo, i-Facebook inikeza ulwazi oluningi mayelana nezethameli. Ngokuchofoza okumbalwa, ungasungula ukuthi zingakanani izithameli zakho, ukuthi zitholakala kuphi, zinamuphi umsebenzi, zineziphi ezinye izintshisekelo zazo, nokuthi kungenzeka zinemali engakanani elahlwayo.
Igoli lakho ukuthola lapho ababukeli bakho futhi libeke umlayezo uqine ngokwanele phambi kwabo.
Namuhla, kunezinkundla zokuxhumana ezehlukene ezingaphezu kwama-50, kepha hhayi zonke ezizosebenzela umkhiqizo wakho. Udinga ukuthola amapulatifomu lapho amakhasimende akho afanele ahlanganyela khona.
Kanjani? Zibuze lo mbuzo:
Ngabe umthengi wakho ofanele uye kuphi ayofuna imininingwane yokuthi ungaxazulula kanjani inkinga oyixazululayo ngokuqukethwe kwevidiyo yakho?
Nazi izindawo ezimbalwa izethameli zakho okungenzeka zisebenzise isikhathi esithile:
I-Social Media: I-Facebook, i-Instagram, i-LinkedIn, i-Twitter, i-Pinterest ne-Snapchat.
Izinjini Zokusesha: Google, Youtube, Bing, Yahoo! I-DuckDuckGo ne-MSN.
Futhi ungaphromotha insiza yakho ye-SVOD nge-imeyili. Uma unohlu lwababhalisile, ukudala ukusakazwa kwe-imeyili ngemiyalezo efanele kungasebenza. Njengababhalisile, bebezovele bajwayelene nomkhiqizo wakho, okwenza kube lula ukuthengisa okubhaliselwe ividiyo kuhlu lwakho.
Ngaphezu kohlu lwakho lwe-imeyili, zama izikhangiso zodwa. Isikhangiso solo kuyinto imeyili acatshangelwe nabanye futhi wathumela kuJehowashi uhlu ababhalisile okuqondene omunye umuntu. Izikhangiso ezizodwa zingakhiqiza amazinga aphezulu okuguqulwa, kepha zidinga imilayezo eqinile futhi efanele ukuze zisebenze.
I-SVOD iyakhula futhi ayibonisi phawu lokwehlisa ijubane. Ngenkathi imikhiqizo emikhulu izobusa emakethe, kunesikhala sabadali bokuqukethwe bevidiyo abazimele ukudweba ucezu lwabo lwempumelelo kule mboni ekhulayo.
Ukuze uqalise insizakalo ye-SVOD ephumelelayo, kufanele wakhe umkhiqizo oqinile izethameli zakho ezizohlangana nawo futhi wakhe iwebhusayithi esebenzayo enokwakheka okukhangayo nemiyalezo eqinile egxile kumakhasimende. Kuzodingeka nokuthi ukhethe uhlelo lokusebenza olufanele lwe-OTT lwababukeli bakho futhi ukhombe futhi umakethe kuzithameli zakho ukwakha isisekelo sababhalisile.
Tags: ukusakaza bukhoma kwevidiyouhlelo lokusebenza le-ott yeselulaukusakaza ividiyo ngokufunwayosvodukubamba ividiyoividiyo ekufunweni
U-PJ ​​ungumsunguli nomongameli we-Uscreen, i-in-one ipulatifomu yokwenza imali ngevidiyo enika amandla osomabhizinisi bamavidiyo nabadali ukuthi benze imali ngokuqukethwe kwabo futhi bakhe imiphakathi namabhizinisi akhulayo azungeze amavidiyo abo.
Izindlela Ezi-7 Zobuchwepheshe Zingonakalisa Umkhiqizo Wakho